Lyn: OS X ပေါ်မှာတစ်မြန် Image ကို Browser ကို
Software ကို & Apps ကပ ကသာ, mac
တစ်ဦးဓာတ်ပုံစုစည်းမှုနှင့်အတူမည်သူမဆိုများအတွက်ပေါ့ပါး Image ကို Browser ကို
Lyn သငျသညျမထိုက်မတန်မြင်သည်အတိုင်းသင်သည်သင်၏ပုံရိပ်များစုစည်းဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ပေါ့ပါးတဲ့ဓာတ်ပုံကို browser တခုဖြစ်တယ်။ Lyn သင် Finder ကိုအတွင်းဖန်တီးမယ့် folder ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤသူ nifty လှည့်ကွက်လုပ်ဆောင်တယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖွဲ့စည်းရပါမည်ကိုမည်သို့ကူးပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုကိုပေးသည်။
Lyn လည်းအပါအဝင်အသုံးအများဆုံး Mac အတွက် image ကိုစာကြည့်တိုက်များ, access လုပ်နိုင် iPhoto , ဓါတ်ပုံများ, Aperture နှင့် Lightroom ။ ဤသည်ဘက်စုံသုံး Lyn ကောင်းတစ်ဦး Aperture သို့မဟုတ် iPhoto ကနေအပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့မည်သူမဆိုများအတွက်အစားထိုး image ကို browser အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း, ဒါမှမဟုတ်သူကိုအတူမပျော်ရွှင်ဖြစ်ပါတယ်စေသည် အသစ်များကိုဓါတ်ပုံများ app ကို ။
စွယ်စုံ browsing အတွက် interface ကိုရွေးချယ်မှုများများပေးသည်။
လက်ရှိရေပန်းစား image ကိုစာကြည့်တိုက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။
batch image file ကို type conversion ။
EXIF နှင့် IPTC ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်း။
ဖြစ်ရပ်များ, မျက်နှာများ, သို့မဟုတ်အခြား iPhoto နှင့် Aperture အဖွဲ့အစည်းများထောကျပံ့ပေးမထားဘူး။
Lyn Installing မဆိုအထူးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများမလိုအပ်ပါဘူး, ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ / Applications ဖိုမှ app ကိုဆွဲယူပါ။ Lyn ဖယ်ရှားခြင်းနည်းတူရိုးရှင်းပါသည်။ သငျသညျ Lyn သင်တို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, ရုံအမှိုက်မှ app ကိုဆွဲယူပါ။
ဘယ်လို Lyn ပုံရိပ်အဖွဲ့များအတွက်အလုပ်လုပ်
သငျသညျ, iPhoto, ဓါတ်ပုံများ, Aperture, ဒါမှမဟုတ် Lightroom ကိုအသုံးပြုပါတယ်လျှင်, သင် Lyn ပုံတစ်ပုံကိုစာကြည့်တိုက်ကိုမသုံးမအံ့သြသွားပါလိမ့်မည် အနည်းဆုံးသင်ကိုအသုံးပြုနေသူမြားကိုမကြိုက်ဘူး။ ဤသည် Lyn အစာရှောင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်; အဲဒါကိုပုံရိပ်တွေကိုပြသထားစဉ်ကို update များနှင့်စုစည်းရန်မဒေတာဘေ့စ overhead ရှိပါတယ်။
အဲဒီအစား, Lyn ဘုံကိုအသုံးပြုသည် Mac ကရဲ့ Finder ကိုဖန်တီးဖိုင်တွဲ ။ သငျသညျထည့်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားဖိုလ်ဒါ Lyn အတွင်း, သို့မဟုတ် Finder ကိုအတူကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ပင်နှစ်ဦးစလုံးလုပျနိုငျ; သငျသညျ Lyn အသုံးပြုနေစဉ်တွင်ကြောင့်အသိုက်ဖိုလ်ဒါကို အသုံးပြု. Finder ကိုအတွက်အခြေခံပုံရိပ်ကိုစာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်, ပြီးတော့မှ add သို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေ-ညှိ။
Lyn ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်မျက်နှာများအဖြစ်စည်းရုံးရေးအဆောက်အဦများ, ထောကျပံ့ပေးမထားဘူးအဘယ်ကြောင့်စံဖိုလ်ဒါပေါ်မှာဤမှီခိုရှင်းပြသည်။ သို့သော် Lyn သငျသညျအဖှဲ့အစညျး၏တစ်ဦးအတန်ငယ်အလားတူနည်းလမ်းဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်စမတ်ဖိုင်တွဲများ, ထောကျပံ့ပေးပါဘူး။
Lyn အသုံးပြုသောစမတ်ဖိုလ်ဒါကိုတကယ်ရှာဖွေမှုများကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်, ဒါပေမဲ့သူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့် Lyn ရဲ့ sidebar မှာပေါ်သိမ်းဆည်းထားလို့ဖြစ်တယ်, သူတို့ကအလွယ်တကူဝင်ရောက်နေနှင့်ဖွင့်မဆိုအခြားဖိုင်တွဲများကဲ့သို့ပေါ်လာပါသည်။ စမတ်ဖိုင်တွဲများနှင့်အတူ, သင်အလံ, rated, တံဆိပ်, သော့ချက်စာလုံး, tag ကိုနှင့်ဖိုင်အမည်အဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သငျသညျပုံတစ်ပုံမှဖြစ်ရပ်တစ်ခု keyword ကို add လျှင်သင်ကအခြား image ကို browser ကို apps များရရှိနိုင်ဖြစ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းကထပ်ဖွနိုင်ဘူး။
ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, Lyn အတွက် sidebar မှာပုံရိပ်တွေကိုဖွဲ့စည်းကြသည်ကိုဘယ်လိုသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ sidebar မှာငါးကဏ္ဍများဆံ့: ရှာရန်, သင်ဖန်တီးမဆိုစမတ်ဖိုင်တွဲများပါဝင်သော; မည်သည့်ကင်မရာ, ဖုန်း, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်အခြား devices များပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ devices, သင့် Mac နဲ့ချိတ်ဆက်သိုလှောင်ရေးကိရိယာနေသော Volumes ကို, သင်သည်သင်၏ Mac ပေါ်တွင်ရှိစေခြင်းငှါ Aperture, iPhoto, ဒါမှမဟုတ် Lightroom image ကိုစာကြည့်တိုက်မှအမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးတော်မူသောစာကြည့်တိုက်များ, လေ့ထိုကဲ့သို့သော Desktop ကို, သင့်အိမ်မှာဖိုင်တွဲ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရုပ်ပုံများအဖြစ်အသုံးပြု Finder ကိုတည်နေရာ, နေသောနှင့်နောက်ဆုံးနေရာများ။
ပုံရိပ်တွေဘေးက sidebar မှာမှနေထိုင်သည့် Viewer ကိုအတွက်ပြသထားပါသည်။ အဆိုပါ Finder ကိုလိုပဲ, သင်ရွေးချယ်ထားသော folder ထဲမှာပုံရိပ်တွေတစ် thumbnail ကိုရှုမြင်ပြသပေးသောအိုင်ကွန်အပါအဝင်ရရှိနိုင်ပါသည်အမျိုးမျိုးသောအမြင်များ, ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Split ကိုအမြင်သေးငယ်ပုံငယ်များနှင့်ရွေးချယ်ထား thumbnail ကို၏ကြီးမားသောအမြင်ပြသထားတယ်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောရက်စွဲ, rating, အရွယ်အစား, အချိုး, ကို aperture, ထိတွေ့မှုနှင့်အဖြစ်ပုံရိပ်ရဲ့ metadata ကိုအတူတစ်လျှောက်သေးငယ်တဲ့ thumbnail ကို, ပြသတဲ့စာရင်းအမြင်ရှိမယ့် က ISO ။
တည်းဖြတ်သည့်စစ်ဆေးရေးအတွက်ဖျော်ဖြေနေသည်။ Lyn လက်ရှိတည်းဖြတ် EXIF ​​နှင့် IPTC သတင်းအချက်အလက်ထောက်ခံပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းလို့ရပါတယ် ပုံတစ်ပုံတွင်ပါရှိသော GPS စနစ်သတင်းအချက်အလက်တည်းဖြတ် ။ Lyn ပုံတစ်ပုံကိုယူခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာပြပေးလိမ့်မယ်တဲ့မြေပုံမြင်ကွင်းပါဝင်သည်။ ယင်းအနေဖြင့်ကံမကောင်းစွာပဲ မြေပုံမြင်ကွင်း ပုံရိပ်တစ်ခုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဘယ်မှာ GPS စနစ်ရှိပါတယ်လျှင်ပုံတွင် embedded ကိုသြဒိနိတ်ဖျောပွနိုငျ, သငျသညျ, ထိုပုံရိပ်ကိုအဘို့ကိုသြဒီနိတ် generate အားလုံးကိုပုံကျနော်တို့အဘို့အလွန်အသုံးလိမ့်မယ်တဲ့အင်္ဂါရပ်မြေပုံအမြင်မသုံးလို့ရပါတယ် အဘယ်သူမျှမတည်နေရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Mono အဘိဓါန် Lake မှာယူ tufa တာဝါတိုင်များ၏ပုံရိပ်တစ်ခုရှိသည်။ ငါတို့သည် Mono အဘိဓါန်ရေကန်သို့ချဲ့ image ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ရှိရာအနေအထားကိုမှတ်သားလျက်, image ကိုအသုံးချကိုသြဒီနိတ်ရှိသည်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာကောင်းတဲ့လိမ့်မည်။ ဒီတစ်ခါလည်းလာမယ့်ဗားရှင်း။
Lyn ကိုလည်းအခြေခံပုံရိပ်တည်းဖြတ်ခြင်းစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ သငျသညျအရောငျချိန်ခွင်လျှာ, ထိတွေ့မှု, အပူချိန်, နှင့်ပျေါလှငျနှင့်မှောင်မိုက်အရိပ်ကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်, Sepia နှင့် Vignette filter များရရှိနိုင်သကဲ့သို့တစ်ဦး Histogram လည်းရှိပါတယ်။ သို့သော်အားလုံးချိန်ညှိမရရှိအလိုအလျောက်ချိန်ညှိနှင့်အတူတစ် slider ကိုတို့ကဖျော်ဖြေနေကြသည်။
သငျသညျယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုးသည့်အခါထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်အချိုးသတ်မှတ်ထားဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ကောင်းတဲ့ဖြတ်တောက်မှုအပိုင်း tool ကိုလည်းရှိပါတယ်။
image ကိုတည်းဖြတ်မှာအကောင်းဆုံးအခြေခံဖြစ်ပါသည်နေစဉ်, Lyn သင်သည်ပြင်ပအယ်ဒီတာများကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါဘူး။ ကျနော်တို့ပြင်ပအယ်ဒီတာမှတဆင့် image-ခရီးစဉ်ပတ်လည်မှ Lyn ရဲ့စွမ်းရည်ကိုထွက်ကြိုးစားခဲ့, ထိုသို့ကိစ္စများမပါဘဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးတည်းဖြတ်ဖျော်ဖြေဖို့အတွက် Photoshop ကိုသုံး, ငါတို့သည်အပြောင်းအလဲများသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တစ်ကြိမ်, Lyn ချက်ချင်း image ကို updated ။
Lyn သင်နှစ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာနှင့်တကွပေါင်းစပ်သောအခါ, တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ပုံရိပ်ကို browser ကိုဖြစ်ပါသည်, ဝါသနာရှင်များနှင့် Semi-လိုလားသူဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးတော်တော်လေးကောင်းသောလုပ်ငန်းအသွားအလာ system ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းရေးစာကြည့်တိုက်စနစ်အားမရှိရင် Lyn ကိုယ်တိုင်နဲ့ Mac ရဲ့ဖိုလ်ဒါကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ image ကိုစာကြည့်တိုက်ဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုအပေါ်မှီခိုနေရသည်။ သင်တစ်ဦးဒေတာဘေ့စစနစ်တွင်ဆင်ကန်းတောတိုးသင်တို့အဘို့စီမံခန့်ခွဲသင့်ရဲ့ပုံရိပ်တွေရှိခြင်းကိုကြိုက်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်သင်တို့ကိုလည်းဖန်တီးဖိုင်တွဲဖွဲ့စည်းပုံ၏ထိပ်ပေါ်မှာထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လျှင်ဒီကောင်းတစ်ဦးအရာရှိနိုင်ပါသည်။
Lyn $ 20,00 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအသက် 15 ရက်ကြာသရုပ်ပြရရှိနိုင်ပါသည်။
IMovie နဲ့ Photomontage Create
ရေဒီယိုတိတ်ဆိတ်: တွမ်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ် Pick
DaisyDisk: တွမ်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ် Pick
BusyContacts: တွမ်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ် Pick
Keka: တွမ်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ် Pick
တစ်ဦးက New iMovie စီမံကိန်းစတင်ပါ
ဆန်းစစ်ခြင်း: BeLight ဆော့ဝဲအနုပညာစာသား 2
ဆှဖှေဲ့ဓာတ်ပုံ: တွမ်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ် Pick
CES 2014: နယူးဘလူးတုသ် Speakers ငါ - M က
ဘလူးတုသ်အသံကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ aux Connections ကို
နောက်ဆုံးထွက် App ကိုဗားရှင်းမှ Snapchat Update လုပ်နည်း
Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်မပေးနိုင်ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးက iPhone Fix ရန်နည်းလမ်းများ
Sony ကပွဲထုတ်မိတ်ဆက်သုံးနယူး ES မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ receiver 2014/15 များအတွက်
အဆိုပါအများစုမှာစှဲ Website များ
Wi-Fi ကို Access ကိုအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို Protected ပါသလား?
တစ်ဦး LDIF ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
Fongo ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ကနေဒါ VoIP ဝန်ဆောင်မှု
Google ရဲ့ Hidden Calculator ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Mac Pro သိုလှောင် Upgrade လမ်းညွှန်
Group မှ Mail ကိုအခမဲ့ 5.2 - အခမဲ့အီးမေးလ်စျေးကွက် Software များ
Grads များအတွက်ထိပ်တန်းမူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံလက်ဆောင်များ - 2016 Edition ကို
ကို Canon 80D DSLR ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Apple ကတီဗီမှာ Apple က Music ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အော်ဒီယိုစာအုပ်များနှင့် Spotify အပေါ်အခြားက Non-ဂီတအကြောင်းအရာရှာပါ
အဘယ်အရာကို CSS ကိုရွေးလေ့လာပါ